Mugari wenhaka. Ongororo yenyaya yechangoburwa naJo Nesbø | Zvazvino Zvinyorwa
Mugari wenhaka. Ongororo yaJo Nesbø's Nyowani Nyowani
Kwekupedzisira Gumiguru Jo Nesbø yenhau yazvino yakaburitswa, Mugari wenhaka, kukwana sui generis kubva pakutanga Mwanakomana iyo Tsvuku neDema idzo dzakaburitsa mumaoko avo. Ndakataura zvishoma nezvake mukati ichi chinyorwa yaAugust. Zvino ndapedza kuverenga zvangu zvekare yeiyi shanduro muchiSpanish uye yakawedzerwa maonero angu yeparishi yakasungirirwa kuna baba vaHarry Hole.
1 Mugari wenhaka
2 Kwete haisi Harry Hole
3 … Hongu kuna Jo Nesbø
4 Nyaya yerudo
Sonny lofthus Akagara mujeri kwemakore gumi. Iye atova nemakore makumi matatu asi anotaridzika kunge mudiki. Yake heroin kupindwa muropa uye guru guru aura kune vamwe vasungwa vanozvipa chitarisiko uye magineti inokwezva munhu wese. Asi zvakare munhu wese, kubva ku mutariri akaora kuTwin, Imhosva huru yaOslo nekutengesa zvinodhaka, inoda kuti magineti uye simba rirambe riri mutirongo kweupenyu hwese. Lofthus yakanaka mbudzi yekuchaja mhosva dzinoverengeka nekuda kwekumubata.
Simon Kefas Iye murwi wekare uye ane ruzivo kwazvo kare. Akadzingwa kubva kuEconomics Crimes nekuda kwekukunda kwake kubhejera, anoramba akamira muHomicide, asi vakuru vake vanofarira kuti asaite ruzha. Rudo rwake ruzere uye kuzvipira kumukadzi wake zvinochengetedzwa, Zvimwe, mudiki uye ane serious dambudziko rekuona izvo zviri kumusiya ari bofu. Saka ari kuda kumuitira CHINHU.
Zvese ivo vanoyambuka nzira dzavo mushure mekuratidzwa kusingatarisirwe kubva kumusungwa kuenda kune asinganzwisisike Lofthus nezvekufa (kunofungidzirwa kuti kuzviuraya) kwababa vake. Saka Sonny anopukunyuka kubva mutirongo achiisa maaramu ese. Nekuti iye anoda kutsiva uye, pamusoro pezvose, kuendesa ruramisiro kunyangwe akatanga kutanga aregerera vaakabatwa. Mune izvozvo kutsiva kunouraya, uyo asingasvetuke asi achishongedza nenzira dzakanaka uye nemanzwiro ehumambo, iwe uchasangana Martha, akatumirwa kunzvimbo yekugamuchira vanhu vakapindwa muropa nezvinodhaka. Hazvitore zvakawanda kuti iyambuke zvakare el amor.
Asi pamwe nzira dzese vakanga vatosangana kamwe chete.
Kwete haisi Harry Hole
Kuti ivo vachiri kubvunza kutenderedza, kunyangwe ivo vasingazive zvakanyanya nesboadicta parishi. Iniwo ndakanga ndisiri mukati Macbeth nekuda kwezvikonzero zviri pachena. Uye zvakare hazvizove mune mamwe maviri maanovhero akazvimirira anosara kuburitswa kwaNesbø, akapfupika uye zvakare akasviba senge erudo (ndinopupura): Ropa pachando y Pakati pehusiku zuva. Ndinoomerera, ini handishingi kududzira kuti gare gare idzi Dzvuku neBlack dzinosvika uye vanoisa ndiani anoziva chii.
Saka ngatisiyei yakanaka yekare HH yega kamwechete mune imwe nguva, kuti ane zvakakwana nemazita ake gumi nerimwe emadzidziso akasiyana siyana uye ayo anomubata muna11 paanodzoka zhizha rinouya. Uye zvese nekuti ...
… Hongu kuna Jo Nesbø
Mune mamwe mazwi, munyori pamusoro pehunhu hwake hwakakwidziridzwa, uyo anosarudza kana kusanyora nezvake chero nguva uye chero zvaari kuda, iye uyo rimwe zuva anomuka achida kumuuraya izvozvi kana kunzwira tsitsi vaverengi vake vanoda HH uye oramba achimuchengeta ari mupenyu. Iye munyori uyo, kana iwe wakabatwa neiye mupurisa seakakandwa sezvaanodiwa, anoramba akatendeka kune ake masitayera, ake akakosha uye anodzokororwa madingindira. Senge mu Mugari wenhaka.
Pachine iye munyori uyo anorondedzera semumwewo munhu kubva kwakasiyana maonero, kunyangwe iri tsoko yekupedzisira yevatambi vake vepamusoro. Ndiani anoshamisika uye anokubvunza nezvazvo zvakaipa, zvakanaka, rudo, kurwadziwa, njodzi, kubudirira uye kutadza, kutambura, kurasikirwa kana kufa munzira chiuru neimwe. Izvo zvinofungidzira uye kushandisa kwezviitiko zvake, asi mune yake chaiyo chiyero uye kupfeka akawanda matehwe. Ngwarira wink vatyairi vematekisi zvakare, boka raaive naro kwechinguva. Anotovakudza na Steinystein, iyo shamwari inoshamisa yeHH. Hezvinoi izvi Pelle, mutyairi wetekisi aine imwe nyaya yekurasika kumashure uyo anobatsira Sonny mukuuya kwake uye kuenda kuOslo.
Uye pamusoro pezvose kuchine munyori ari inokwanisa kukuita kuti unzwire tsitsi nezvakanyanya, zvikanganiso, kukundikana uye zvakaipa, zvehunhu hwevanhu. Zvinoitika naHH, asi zvakare pano naSonny Lofthus naSimon Kefas, mativi maviri emari imwe chete, rimwe racho rese rezvese kuitira kutsiva kana kuzvinunura, kunyangwe ivo pachavo. Asi iko kunzwira tsitsi kwacho kuri kunyatsoonekwa kuri mu mavara echikadzi, kunyanya mune iyo ye Martha, uyo anobaira zvese kuti awane rudo kuna Sonny, chaiye mhondi, asingagoni kufungidzira asi zvinonzvenga anomudhonza.
Izvo zvaitaridzika seni kumashure muzuva randakaiverenga kekutanga in Shona. Rudo munzira dzose kubva kudanana kune baba-mwana. Ngatirangarirei: iro rekutanga zita ndere Mwanakomana, uye nekudaro iye anoreva kune protagonist yenoverengeka kakawanda. Baba vake vaikosha kwazvo kwaari, asi zvakare kuna Simon Kefas.
Uye hongu, kune chinodhaka, jeri nemhuka dzayo, zvimiro zvekusingaperi zveruzivo rwematsotsi, dzinokachidza dzimba yeNesbø kuti vaverengi vavo vane ruzivo havachashamisike zvakanyanya nekuti tavabata. Asi ivo vakanaka kwazvo uye vakanyorwa mune yakasarudzika manyorerwo eiyi diki diki bhendi yeNorway bhendi iyo yauchiri kuvatenda nayo.
Isu hatirangi vanhu nekuti vakaipa, asi nekuti ivo vanoita sarudzo idzo dzakaipa pakiti. Tsika hadzisi chinhu chakatumwa kubva kudenga, chimwe chinhu chisingaperi, iwo angori mirawo anoshandira kunaka kwepakeji. Uye avo vasingakwanise kutevedzera iyo mirawu, maitiro anogamuchirwa ehunhu, havangambokwanise kuzviita nekuti havana rusununguko rwekusununguka. Sevamwe vedu, matsotsi anongoita zvaanoita. Saka iwe unofanirwa kuvabvisa kuitira kuti varege kuberekana uye kutapura boka nemajini avo ehunhu husina kunaka.
Ndiwo magumo here? Hongu, ndiyo inonzwisisika. Vanyori vanokodzera kunzwirwa tsitsi here? Hongu, vese "vakanaka" uye "vakaipa" nekuti anogara achikusvitsa pakuvada ivo, kuti iwe uve kudivi rake, kuti vakuseke. Pano anotyisa uye asinganzwisisike Mapatya ndiye kukwana kwakakwana kweuipi sezvazvaive Hecate murume mune nesbonia Macbeth, kana iyo Fisherman de Ropa pachando. Kana sevamwe vavengi vakaipisisa Harry Hole anotarisana navo, kunge anoshoreka uye anodikanwa Mikel Bellman.
Uye avo "vakanaka vakomana" vachiri madanana eherohero. Heano Sonny naSimoni muzvikamu zvakaenzana. Asi ndizvo zvichaita iyo Olav yeBmhepo pamusoro pechando and the Jon de Pakati pehusiku zuva. Kunyange Plug, diki rayo uye rakanyanya kuita zvematongerwo enyika protagonist ye enganonyorwa dzevana. Ivo vanongova ivo Nesbø zvinhu. Rega Harry Hole korona iyo piramidhi? Bvumiranai. Zviite chete? Kwete.
kana uchida Jo Nesbø, unofanira kungoverenga. Unosarudza HH? Zvakakwana. Asi kungoitika usapotsa rimwe remabhuku ake.
-Kuregererei? Wamuudza here kuti unomuda?
-Kwete. Ndinofanira kuzviita here?
-Kumaawa ese. Kakawanda pazuva. Funga nezvazvo se oxygen. Haimbokundikani kuravira zvakanaka. Ndinokuda ndinokuda. Edza uye iwe uchaona zvandinokuudza.
"Sei ... unoziva sei kana mumwe munhu achikuda, Pelle?"
"Icho chinhu chinongozivikanwa." Ndihwo huwandu hwezvinhu zvese zvidiki izvo zvausingakwanise kunongedza munwe wako. Rudo runokuputira semhepo mune yekugezesa, iwe unoziva? Iwe haugone kuona donhwe rega rega, asi zvinokudziya. Uye zvinoita kuti unyorove. Uye zvinokuchenesa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » Mugari wenhaka. Ongororo yaJo Nesbø's Nyowani Nyowani
Kubvunzana naEstela Chocarro: Noir novel mune yekumaruwa Navarra.
Kupemberera San Martín nemamwe mabhuku enguruve